अमेरिकामा शताब्दीकै सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाको उदय, ट्रम्पविरुद्ध महाभियोग लाग्नसक्ने ! Bizshala -
अमेरिकामा शताब्दीकै सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाको उदय, ट्रम्पविरुद्ध महाभियोग लाग्नसक्ने !
वासिङटन (रासस/एपी) । अमेरिकी कङ्ग्रेसको तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्सको सभामुखमा डेमोक्र्याटिक पार्टीकी वरिष्ट नेतृ न्यान्सी पेलोसी चुनिनु भएको छ । अमेरिकी संसदको सभामुख हुने उहाँ पहिलो अमेरिकी महिला नेतृ पनि हुनुभएको छ ।
संसदमा आठ वर्षपछि बहुमत हासिल गरेको डेमोक्र्याटिक पार्टीका तर्फबाट सभामुख पदमा अरु केहीले रुचि देखाएका भएपनि अन्ततः पेलोसीले उक्त पद प्राप्त गर्न सफल हुनुभयो ।
“सबै कङ्ग्रेस सदस्यहरु उक्तिकै योग्य हुनुहुन्छ,” चुनावी प्रचारका क्रममा पेलोसीले भन्नुभएको थियो, “तर मैले गरिरहेका कामप्रति मलाई गर्व छ ।”
सभामुखको आसनमा पदस्थापन गर्दै पेलोसीले अमेरिकी विभाजित राजनीतिक वातावरणमा सबैसँग मिलेर कार्य गर्न उत्सुक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कङ्ग्रेसको यो सभाकक्ष अमेरिकी टाउन हल हुनुपर्दछ । यहाँ मानिसले हामीबीच हुने बहसलाई हेर्न पाउनुहुनेछ र जनताका आवाजहरु सुन्न पाउनुहुनेछ । जनआवाजले हाम्रा निर्णयमा प्रभाव पार्नेछ ।”
डेमोक्र्याटिक पार्टीका प्राथमिकताबारे चर्चा गर्दै उहाँले स्वास्थ्यसेवाको लागत न्यून गर्ने, हरित पूर्वाधारमा लगानी बढाउने तथा सरकारको इमान्दारितालाई पुनस्र्थापित गर्ने बारेमा प्रकाश पार्नुभएको थियो ।
“हामीले मध्यम वर्गीय अमेरिकीको भलाईलाई उच्च प्राथमिकता दिनु पर्दछ, किनभने मध्यम वर्ग नै हाम्रो लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो,” पेलोसीले भन्नुभयो ।
पाँच छोराछोरीको आमा तथा नौ नातिनातीनाकी हजूरआमा न्यान्सी पेलोसी अमेरिकामा एक्काइसौं शताब्दीकै सर्वाधिक शक्तिशाली राजनीतिज्ञका रुपमा उभिनुभएको छ ।
ह्वाइट हाउसमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र अमेरिकी माथिल्लो सदन सिनेटमा रिपब्लीकन पार्टीको बहुमत रहेको वर्तमान अवस्थामा तल्लो सदनको प्रभावशाली नेतृत्व प्रदान गरी डेमोक्र्याटिक पार्टीलाई अमेरिकी राजनीतिको केन्द्रमा ल्याउनुपर्ने चुनौती पेलोसीमाथि छ ।
पेलोसीमाथि डेमोक्र्याट पार्टीकै सदस्यबाट अर्को दबाब पनि छ, त्यो हो ट्रम्पविरुद्ध महाभियोगको प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने । पेलोसीले राष्ट्रपति माथिको महाभियोग प्रस्ताव “विभाजनकारी कृयाकलाप” रहेको बताउनुभएको छ ।
“हामीले राष्ट्रपति विरुद्ध राजनीतिक कारणबाट महाभियोग लगाउनु हुँदैन,” पेलोसीले भन्नुभयो । उहाँले राष्ट्रपति विरुद्ध रोबर्ट मुलरको छानबिन समितिको प्रतिवेदनका नतिजालाई हेरेर मात्र नयाँ कदम चाल्न सकिने स्पष्ट गर्नुभयो ।
अमेरिकी संविधान र न्यायिक प्रणालीमा वहालवाला राष्ट्रपतिलाई पर्याप्त आधार बेगर महाभियोग लगाउन सकिँदैन । राष्ट्रपति ट्रम्पले आफूले कुनै गलत कार्य गरेको निरन्तर अस्वीकार गरिरहनुभएको छ ।
सदनद्वारा बजेट पारित, मेक्सिको पर्खालमा बजेट परेन
डेमोक्र्याटिक पार्टीको बहुमत हासिल गरेको अमेरिकी संसदको पहिलो सत्रले अमेरिकी सङ्घीय कार्यालयहरुको बजेट पारित गरेको छ । सदनले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले प्रतिज्ञा गर्नुभएको सीमा पर्खालको बजेटलाई भने अनुमोदन गरेको छैन ।
बिहीबार राति बजेट पारित गरेसँगै पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै नवनियुक्त सभामुख पेलोसीले भन्नुभयो, “हामीले मेक्सिको सीमामा पर्खाल निर्माण गर्न बजेट पारित गरेनौं । हामी पर्खालको विपक्षमा छौं भन्नेमा कसैलाई शंका छ र ?”
बजेट पारित नभएका कारण १३ दिनदेखि कैयौं सङ्घीय कार्यालयहरु आंशिक बन्द छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले पर्खालका लागि बजेट पारित नभए विनियोजन विधेयकमा हस्ताक्षर नगर्ने अडान राख्नुभएको छ । ह्वाइट हाउसका अधिकारीहरुले राष्ट्रपति ट्रम्पले पर्खालको बजेटका बारेमा विशेषाधिकार (भिटो) लगाउन सक्ने बताएका छन् ।
सोसल मिडियाको डिटेल सुम्पिएपछि मात्र अमेरिकाको भिजा पाइने !
काठमाण्डौ । अमेरिकाले आफ्नो भिजा नियममा थप कडाई गरेको छ । अब...
भारतका सेयर लगानीकर्ताले एकैदिन रु. २.८१ लाख करोड कमाए, कारण
काठमाण्डौ । सोमबार भारतका सेयर लगानीकर्ताहरुको सम्पत्ति एकैदिन...